Godina Gujii bahaa Aanaa Adoolaa magaalaa Maleekkaa keessatti hiriira guddatti taasifamaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Gujii bahaa Aanaa Adoolaa magaalaa Maleekkaa keessatti hiriira guddatti taasifamaa jira.
Godina Gujii bahaa Aanaa Adoolaa magaalaa Maleekkaa keessatti hiriira guddatti taasifamaa jira.
Godina Gujii bahaa Aanaa Adoolaa magaalaa Maleekkaa keessatti hiriira guddatti taasifamaa jira. Daandiin gara Adoolaa, Nageelle Booranaa fi Shaakkisoo geessulle cufameera.
Invest in young leaders, #Ethiopian PM says https://t.co/AwNOtIllgH “If existing leaders help the next generation, we will have an emerging Africa. The problem in Africa is that existing leaders do not appreciate those who are exiting…” PM #AbiyAhmed
— Addis Standard (@addisstandard) May 8, 2018
An kaleessan xumure dubbii. Bu’aan Mootummaa Maqaasaa kunoo isa kana. Ummanni Gujii abdii kutatee fincilatti deebi’eera. Hima didduun…
Qeerroon Gujii sababa bilisummaa fi haqaa gaafataniif qe’ ee abbaa isaanii keessatti humna alagaan reaabamaa jiru. Otuu rasaasaan reebamanii, gaaffii isaanii kana gaafachuu irraa duubatti hin deebine. Mormii har’a gaggeessan irartti Qeerroon hedduun rasaasaan rukutamaniiru.
….amma sa’aatii 11:10tti falmattoota haqaa lamatu rasaasaan dhowamee hospitaala Adoolaa gale. Dargaggoo Habyamuu fi hojjataa ganda 03 kan ta’e Obbo Magarsaan amma hospitaala jiru.
Ummati keenyas, kan rukutame gara mana yaalaatti, kaan immoo gaaffii haqaa qaban dhiyeesuu itti fufanii jiru.
Godina Gujii Aanaalee hedduu keessatti hiriirri mormii hawaasaan gaggeeffamaa jira.
Aanaa Adoolaa magaalaa Adoolaa keessatti Poolisoonni Oromiyaa hawaasa hiriira bahan irratti dhukaasa banuun hanga gabaasni kun qindaayetti dargaggoonni 2 rasaasan rukutamanii Mana yaalaa seenuun waldhamaa jiru.
Haaromfamuu heeyyama MIDROC GOLD Laga-dambiitiin wal qabatee mormiin hawaasaan
godina Gujiitti torbaan darbe dhooye, ammas itti fufeera.
Mormii kanaan Daandiileen gurguddoon magaalota godinichaa wal qunnamsiisan dhagaa fi gudeelcha gurguddaan cufamaniiru.
Lagannaan gabaas magaalota akka Shaakkisoo fi kanneen biroo keessatti gaggeeffamaa jira.
Mormii hawaasaa kana dhaabsisuuf humnoonni mootummaa Ummata irratti hidhaa fi reebicha gaggeessanis mormiin eegalame garuu bifa qindoominna qabuun cimee itti fufaa jiraachuun maddeen keenya Gujii irraa gabaasaniiru.
OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA CAAMSAA 7, 2018